यहूदी धर्म र इसाई धर्ममा धेरै मानिसहरू छन् जसले साँचो परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्, जसले मन्दिरहरू र मण्डलीहरूमा परमेश्‍वरको आराधना गर्छन्, र जो सबैको अगाडि धेरै धर्मी देखिन्छन्। कसै-कसैले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका आखिरी दिनहरूको कामलाई स्वीकार नगरे पनि, तिनीहरूले स्पष्ट रूपमा परमेश्‍वरको विरोध वा निन्दा गर्ने केही पनि गरेका छैनन्। के परमेश्‍वरले तिनीहरू जस्ता मानिसहरूलाई मुक्ति दिनुहुन्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
यहूदी धर्म र इसाई धर्ममा धेरै मानिसहरू छन् जसले साँचो परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्, जसले मन्दिरहरू र मण्डलीहरूमा परमेश्‍वरको आराधना गर्छन्, र जो सबैको अगाडि धेरै धर्मी देखिन्छन्। कसै-कसैले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका आखिरी दिनहरूको कामलाई स्वीकार नगरे पनि, तिनीहरूले स्पष्ट रूपमा परमेश्‍वरको विरोध वा निन्दा गर्ने केही पनि गरेका छैनन्। के परमेश्‍वरले तिनीहरू जस्ता मानिसहरूलाई मुक्ति दिनुहुन्छ?
“किनभने परमेश्‍वरले यसो भनेर आज्ञा दिनुभएको छ, आफ्‍नो बाबु र आमाको आदर गर: र, बाबु वा आमालाई जसले सराप्छ त्यो मारियोस्। तर तिमीहरू भन्छौ, जोसुकैले आफ्‍नो बाबु वा आमालाई यसो भन्‍नेछ, तपाईंले मबाट जे लाभ पाउन सक्‍नुहुन्थ्यो, त्यो उपहार हो; अनि उसले आफ्‍नो बाबु वा आमाको आदर गर्नु पर्दैन, ऊ स्वतन्त्र हुनेछ। यसरी तिमीहरूले आफ्‍नो परम्‍पराद्वारा परमेश्‍वरको आज्ञालाई व्यर्थ तुल्याइदिएका छौ। तिमीहरू ढोङ्गीहरू हौ, यशैयाले यसो भनेर तिमीहरूको बारेमा ठीकै अगमवाणी गरेका थिए, यी मानिसहरू आफ्ना मुखहरूले मात्र मेरा नजिक आउँछन् र तिनीहरूका ओठहरूले मात्र मेरो आदर गर्छन्; तर तिनीहरूका हृदय मदेखि टाढा छ। तर तिनीहरूले व्यर्थमा मेरो आराधना गर्छन्, मानिसहरूका आज्ञाहरूलाई सिद्धान्तको रूपमा सिकाउँछन्” (मत्ती १५:४-९)।
परमेश्‍वरले यहोवामा विश्‍वास गर्नेहरूको धर्मलाई के नाम दिनुहुन्छ? यहूदी धर्म। तिनीहरू एक प्रकारको धार्मिक समूह बने। अनि परमेश्‍वरले येशूमा विश्‍वास गर्नेहरूको धर्मलाई कस्तो पदवी नाम दिनुहुन्छ? (इसाई धर्म।) परमेश्‍वरको नजरमा, यहूदी धर्म र इसाई धर्मले धार्मिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई किन त्यसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ त? परमेश्‍वरले परिभाषित गर्नुभएका यी धार्मिक समूहहरूका सबै सदस्यहरूमाझ, के परमेश्‍वरको डर मान्ने र दुष्टताबाट अलग बस्ने, उहाँको इच्छाअनुसार कार्य गर्ने, र उहाँको बाटो पछ्याउने कोही छ? (छैन।) यसले कुरा स्पष्ट पार्छ। के परमेश्‍वरको नजरमा नाम मात्रको शैलीमा उहाँलाई पछ्याउनेहरू उहाँले विश्‍वासीहरू भनी स्वीकार गर्नुभएका व्यक्तिहरू बन्न सक्छन् त? के तिनीहरू सबैको परमेश्‍वरसँग सम्बन्ध हुन्छ त? के तिनीहरू सबै उहाँको मुक्तिको पात्रहरू बन्न सक्छन् त? (सक्दैनन्।) त्यसो भए, कुनै दिन तिमीहरू परमेश्‍वरले धार्मिक समूह भनी हेर्नुहुने समूहमा परिणत हुनेछौ त? (यस्तो हुन सम्भव छ।) कुनै धार्मिक समूहमा परिणत हुनु—त्यो अकल्पनीय देखिन्छ। यदि मानिसहरू परमेश्‍वरको नजरमा कुनै धार्मिक समूहको हिस्सा बन्छन् भने, के तिनीहरूले उहाँबाट मुक्ति पाउन सक्‍नेछन् त? के तिनीहरू उहाँको घरका हुन् त? (होइन, तिनीहरू उहाँको घरका होइनन्।) त्यसो भए, सारांशित गर्ने कोसिस गरौं: साँचो परमेश्‍वरमा नामको मात्र विश्‍वास गर्ने यी मानिसहरू, जसलाई उहाँले धार्मिक समूहहरूका हुन् भन्ने ठान्‍नुहुन्छ—यी मानिसहरूले कस्तो बाटो हिँड्छन् त? के यस्ता मानिसहरू परमेश्‍वरको बाटोलाई कहिल्यै पनि नपछ्याईकनै विश्‍वासको झण्डा हल्लाउने र उहाँमा विश्‍वास गर्ने तर उहाँलाई कहिल्यै आराधना नगर्ने बरु उहाँलाई त्याग्ने बाटोमा हिँड्छन् भनेर भन्न सकिन्छ? यसको मतलब, तिनीहरू परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने तर उहाँलाई त्याग्ने र उहाँको बाटो नपछ्याउने बाटोमा हिँड्छन्; तिनीहरूको बाटो त्यस्तो बाटो हो जसमा तिनीहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास त गर्छन् तर आराधना भने शैतानको गर्छन्, तिनीहरूले दियाबलसको आराधना गर्छन्, तिनीहरूले तिनीहरूका आफ्नै व्यवस्थापन अघि बढाउने र तिनीहरूको आफ्नै राज्य स्थापित गर्ने प्रयास गर्छन्। के यसको सार यही होइन र? के मानवजातिको मुक्ति सम्‍बन्धी व्यवस्थापन योजनासँग यस्ता मानिसहरूको कुनै सम्बन्ध हुन्छ त? (हुँदैन।) जति धेरै मानिसहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरे पनि, उहाँले तिनीहरूको विश्‍वासलाई धर्म वा समूहको विश्‍वास भनी परिभाषित गर्नुभएपछि, उहाँले तिनीहरूलाई मुक्ति दिन सकिँदैन भनी पहिले नै निर्धारण गरिसक्नुभएको हुन्छ। म किन यसो भन्दैछु त? परमेश्‍वरको काम र मार्गनिर्देशनरहितका र उहाँलाई आराधना गर्दै नगर्ने मानिसहरूको गिरोह वा भीडमा, तिनीहरूले कसलाई आराधना गर्छन् त? तिनीहरूले कसलाई पछ्याउँछन् त? स्वरूप र नाममा, तिनीहरूले कुनै व्यक्तिलाई पछ्याउँछन् तर तिनीहरूले आधारभूत रूपमा कसलाई पछ्याउँछन् त? अन्तस्करणमा तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई स्वीकार गर्छन्, तर वास्तविक रूपमा भने, तिनीहरू मानव चालबाजी, बन्दोबस्तहरू र नियन्त्रणको अधीनमा रहन्छन्। तिनीहरूले शैतान, दियाबलसलाई पछ्याउँछन्; तिनीहरूले परमेश्‍वरसँग शत्रुवत् रहेका शक्तिहरू र उहाँका शत्रुहरूलाई पछ्याउँछन्। के परमेश्‍वरले मानिसहरूको यस्तो झुण्डलाई मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ? (चाहनुहुन्न।) किन चाहनुहुन्न त? के तिनीहरू पश्‍चात्ताप गर्न समर्थ हुन्छन् त? (हुँदैनन्।) तिनीहरू पश्‍चात्ताप गर्न असमर्थ हुन्छन्। तिनीहरूले मानव उद्यम अघि बढाउँदै र तिनीहरूका आफ्नै व्यवस्थापन सञ्चालन गर्दै विश्‍वासको झण्डा हल्लाउँछन् र तिनीहरू मानवजातिको मुक्ति सम्‍बन्धी परमेश्‍वरको व्यवस्थापन योजनाको विपरीत दौडन्छन्। तिनीहरूको अन्तिम परिणाम भनेको परमेश्‍वरद्वारा घृणित र तिरस्कृत हुनु हो; उहाँले यी मानिसहरूलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्न, तिनीहरूले पश्‍चात्ताप गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूलाई शैतानले पहिले नै बन्दी बनाइसकेको छ—तिनीहरू सम्पूर्ण रूपमा शैतानको हातमा छन्। तेरो विश्‍वासमा, के तैँले कति वर्ष परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको छस् भन्ने तथ्यले उहाँले तँलाई स्याबासी दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने कुरामा कुनै अर्थ राख्छ र? के तैँले पालना गर्ने रीतिरिवाज र नियमहरूले कुनै अर्थ राख्छन् र? के परमेश्‍वरले मानिसहरूको अभ्यासको विधिलाई हेर्नुहुन्छ र? के उहाँले कति जना मानिसहरू छन् भन्ने कुरालाई हेर्नुहुन्छ र? उहाँले मानवजातिको एक भागलाई छनौट गर्नुभएको छ; उहाँले तिनीहरूलाई मुक्ति दिन सकिन्छ कि सकिँदै र तिनीहरूलाई मुक्ति दिनुपर्छ कि दिनुपर्दैन भन्ने कुराको मापन कसरी गर्नुहुन्छ त? यी मानिसहरूले हिँड्ने मार्गहरूको आधारमा उहाँले यो निर्णय गर्नुहुन्छ। अनुग्रहको युगमा, परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई बताउनुभएका सत्यताहरू आजका भन्दा कम संख्यामा र कम विशिष्ट भएका भए तापनि, उहाँले त्यो बेलाका मानिसहरूलाई पनि सिद्ध पार्न सक्नुहुन्थ्यो, र मुक्ति पनि सम्भव नै थियो। त्यसकारण, जहाँसम्म धेरै सत्यताहरू सुनेका र परमेश्‍वरका इच्छाहरू बुझेका यस युगका मानिसहरूको कुरा छ, यदि तिनीहरू उहाँको मार्ग पछ्याउन असमर्थ छन् र उनीहरूले मुक्तिको बाटो हिँड्न सक्दैनन् भने, तिनीहरूको अन्तिम परिणाम के हुनेछ त? तिनीहरूको अन्तिम परिणाम इसाई धर्म र यहूदी धर्ममा विश्‍वास गर्नेहरूको जस्तै हुनेछ; त्यसमा कुनै पनि भिन्नता हुनेछैन। यो परमेश्‍वरको धर्मी स्वभाव हो! तैँले जति नै धेरै उपदेशहरू सुनेको भए पनि वा तैँले जति नै धेरै सत्यता बुझेको भए पनि, यदि आखिर तैँले मानिसहरू र शैतानलाई पछ्याउँछस् भने, र अन्ततः तँ परमेश्‍वरको मार्ग पछ्याउन असमर्थ हुन्छस् र तँ परमेश्‍वरको डर मान्न र दुष्टताबाट अलग बस्न सक्दैनस् भने, त्यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्‍वरले घृणा र तिरस्कार गर्नुहुनेछ। बाह्य स्वरूप सबैलाई हेर्दा, परमेश्‍वरद्वारा घृणा र तिरस्कार गरिएका यस्ता मानिसहरूले अक्षरहरू र धर्मसिद्धान्तहरूको बारेमा धेरै कुरा बताउन सक्छन्, र तिनीहरूले धेरै सत्यता बुझेका पनि हुन सक्छन्, तैपनि तिनीहरू परमेश्‍वरको आराधना गर्न असमर्थ हुन्छन्; तिनीहरू परमेश्‍वरको डर मान्न र दुष्टताबाट अलग बस्न सक्दैनन्, र तिनीहरू उहाँप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित हुन असमर्थ हुन्छन्। परमेश्‍वरको नजरमा, उहाँले तिनीहरूलाई धर्मको हिस्साको रूपमा, मानिसहरूको समूहको रूपमा—मानिसहरूको गिरोहको रूपमा—र शैतानको वास बस्ने ठाउँको रूपमा परिभाषित गर्नुहुन्छ। तिनीहरू सबैलाई सामूहिक रूपमा शैतानको गिरोह भनिन्छ, र यी मानिसहरूलाई परमेश्‍वरले सम्पूर्ण रूपमा घृणा गर्नुहुन्छ।
अघिल्लो: तपाईं आखिरी दिनहरूमा सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरले सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ र मानिसको न्याय गर्ने र उसलाई शुद्ध पार्ने काम गर्नुहुन्छ भनी गवाही दिनुहुन्छ। सबैभन्दा आखिरीमा, उहाँले विजेताहरूको एउटा समूह प्राप्त गर्नुहुनेछ, र त्यसपछि यो पुरानो, दुष्ट युगलाई पूर्ण रूपले नाश पारेर मानिसलाई नयाँ युगमा डोऱ्याउनुहुनेछ। परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूको दौरान यो पुरानो, दुष्ट युगलाई कसरी नाश पार्नुहुनेछ भन्ने विषयमा कृपया तपाईंले अझ विस्तारमा सङ्गति गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि?
अर्को: पहिले, ममा विवेकको कमी थियो। म सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका आखिरी दिनहरूको कामको विरोध र निन्दा गर्न पाष्टरहरू र एल्डरहरूको पछि लागेँ, र निन्दा गर्दै हिँड्न तिनीहरूको साथमा गएँ। के परमेश्‍वरले अझै पनि मलाई मुक्ति दिनुहुन्छ?